Raharahana kidnapping Toamasina : hokarohina izay niavian’ireo fitaovam-piadiana | NewsMada
Raharahana kidnapping Toamasina : hokarohina izay niavian’ireo fitaovam-piadiana
Efa avotra i Arnaud, saingy mbola mitana ny sain’ny maro hatrany ny tohin’ny “Raharaha kidnapping” any Toamasina. Tafakatra valo ireo voasambotra ny alatsinainy teo. Nahataitra ny rehetra ny fahitana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika. Mitohy ny fanadihadiana, ahafantarana izay niavian’izany.
Tsy tapitra hatreo akory ny “raharaha kidnapping” ao Toamasina. “Aoka tsy atao fialan-tsiny na ho fiarovan-tena ny filazana fa fitaovam-piadiana very nandritra ny raharaha 2002 ireo. Tsy maintsy jereko akaiky miaraka amin’ny mpitandro filaminana hanao ny famotorana hoe an’iza ary avy aiza ireto fitaovam-piadiana mahery vaika saika hamonoana ny samy Malagasy ireto”, hoy ny fanazavana hentitra nataon’ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina, Lauret Rajaona Thierry. Basy Kalachnikov miisa 4, miaraka amin’ny bala miisa 119, grenady iray ary vovoka mandatsa-dranomaso sy mampamaivay hoditra iray harona mantsy no tratran’ny mpitandro filaminana tao amin’ilay trano nitanana an’i Arnaud. Nomahafisin’ny mpampanoa lalàna koa fa tsy misy azo omena fahafahana vonjimaika izay voakasik’ ity fakana an-keriny ity. Mahatratra valo, amin’izao fotoana izao, ny olona voasambotra farany, ny alatsinainy teo, ary efa 20 ny olona any am-ponja.
Polisy miisa 18 no nihetsika
Tamin’ny 8 ora sy 15 minitra kosa dia efa nampiantso ny mpanao gazety teny amin’ny birao fiasany ny kaomisera divizionera Lié, talem-paritry ny filaminana anatiny ao Toamasina, omaly talata. Nilaza ny fahombiazan’ny polisy tamin’ny fikarohana velona an’i Arnaud izy ireo. Efa ho 50 andro, ny datin’ny 11 janoary teo ity zanaka mpandraharaha ity no tany am-pelatanan’ny jiolahy, raha efa novonoina kosa i Annie, ilay tovovavy.
Tetsy amin’ny fokontany Andranomadio parisela 11/41 no nahitana an’i Arnaud sy ireo olon-dratsy. “Misy trano hazo efatra ao ambadik’ilay trano vato, ka ny iray tamin’ny efitrano tao no nametrahana an’ i Arnaud. Maizina tanteraka ilay efitrano, izay nahitana vata fahitalavitra sy vata fampangatsiahana”, hoy ny fanazavana. Tao amin’ny efitra telo hafa mifanila aminy no nisy an-dRakoto Leonce, mpiandry sy mpanome sakafo an’i Arnaud. Izy ilay lavon’ny balan’ny polisy, rehefa namaly azy ireo. Tao amin’ny efitrano fahatelo hafa kosa no nahitana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika.
“Niainga avy tamin’ny fisamborana an’ i Mainty Vendredi , tany Marovato kaominina ambanivohitr’i Mahambo, no nahafahana nanaporofo marina ny misy an’ i Arnaud. Polisy miisa 18 avy etsy Tanambao II sy UIR ary ny Fip Ankirihiry no nifanome tanana nanatontosa ny fisamborana. “Nisy ny famaliana nataon-dRakoto Leonce ka izay no nahafaty azy”, hoy ny polisy. Nilaza ny talem-paritry ny polisy fa ry zareo no nahita ny vokatra, dia ry zareo ihany no hanao ny famotorana ary aorian’ izay vao hatolotra ny “cellule d”enquête” mialoha ny hanolorana azy ny fampanoavana. Noporofoin’ity manamboninahitra ity fa tsy nisy fanomezam-bola takalon’aina izao vokatra izao.